ANTANANARIVO RENIVOHITRA : Nafindra amin’ny Kaominina ny fitantanana ny “Parking”
Tontosa, omaly 17 febroary 2021 ny fifanaovan-tsonia teo amin’ny “Easy park” sy ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA). 18 février 2021
Araka ny tapaka, ny kaominina manomboka izao no mandray an-tanana ny fitantanana ny toeram-piantsonana eto an-drenivohitra. Tsy ny “Easy park” iray manontolo akory no afindra amin’ny kaominina fa ny fitaovana, ny fahaiza-manaony, ny olona ary ny rindrambaiko nampiasain’ity orinasa ity. Marihina fa efa nandritra ny 5 taona no nisy ny fiaraha-miasa teo amin’ny CUA sy ny Easy park ary 1 500 teo ho eo ny isan’ireo toeram-piantsonanana notantanan’ity farany tao anatin’izay.
Nisy fifanarahana natao, hoy ny fanazavan’ny Ben’ny tanàna Naina Andriantsitohaina, ka ny fitaovana rehetra dia novidian’ny kaominina avokoa. Tsy avy hatrany dia mifindra amin’ny kaominina ireo voalaza etsy ambony fa mbola iaraha-mitantana mandritra ny volana vitsy. “Tsy mora ny famindrana izao fitantanana izao ary mbola hisy hatrany ny fiaraha-miasa eo amin’ny roa tonta mandra-pahavita ny fandaminana sy ny famehezana tanteraka ireo fitaovana sy fahaiza-manao mba ho mangarahara sy tena hampitombo ny kitapom-bolan’ny Kaominina Antananarivo renivohitra tokoa ny “parking”, hoy ny voalaza.
Tsara ny manamarika fa hanampy eo anivon’ny fitantanana ny tsena
amin’ny “digitalisation” ihany koa ireo fitaovana ara-teknolojia avy amin’ny “easy park” Nanome toky ny Ben’ny tanàna, Naina Andriantsitohaina fa hisy fanatsarana noho ny teo aloha ny fitantanana ny toeram-piantsonana eto Antananarivo sy ny manodidina amin’izao fandraisan’ny kaominina azy izao. Horaisin’ny kaominina avokoa ireo mpiasa tao amin’ny “easy park” manaiky fifanarahana. Tsy maintsy hampihena ny mpiasa ao aminy mantsy ity orinasa ity atsy ho atsy.
Tsy hisy fitomboana kosa ny saram-piantsonana eto Antananarivo. Ny isan’ny toeram-piantsonana no mety hitombo arakaraka ny filana sy ny fangatahana tonga any amin’ny kaominina. Na eo aza anefa ny fiovan-drafitra, tsy ho voafafa, tsy maintsy aloa hatrany ny lamandy ho an’ireo fiara nosazian’ny easy park noho ny tsy fanarahan-dalàna teo aloha.